🥇 ▷ Waxaa sifeeyay naqshaddii Sony Xperia 2 iyada oo ay ugu wacan tahay daboolida qaarkood ✅
Waxaa sifeeyay naqshaddii Sony Xperia 2 iyada oo ay ugu wacan tahay daboolida qaarkood
Sony Xperia 2 ayaa loo arkay isagoo uga mahadcelinaya qaar ka mid ah kiisaska la sifeeyay. Terminal-kan ayaa lagu shaacin karaa inta lagu gudajiro IFA-da ee magaalada Berlin, maadaama shirkadda Japan ay caadiyan 6-da biloodba mar ay duullimaadyo ka furayso Tani Sony Xperia 2 waxay noqon laheyd cusboonaysiin ah Xperia 1, marka waxaan arki karnay horumar xagga duubista fiidiyowga xirfadda leh iyo waxyaabo kaloo badan. Tani waa qaabeynteeda.
Sawirada ayaa si cad u muujinaya naqshada aaladda. Laakiin waa inaan maanka ku haynaa inay tahay kiis, oo aan ku daadinaynin naqshadda aaladda. Taasi micnaheedu waa in, Sony sida caadiga ah waxay fududaysaa cabbiraadda iyo qorshayaasha kala duwan ee marinnada xiga ee soo-saareyaasha soo-saaraha alaabada – marka laga hadlayo kiiskan-. Sidan, waxsoosaarayaashu waxay naqshadeyn karaan oo sameyn karaan hoyga si ay diyaar ugu noqdaan maalinta la bilaabay. Waxaan aragnaa sida ay Sony Xperia 2 ula imaanayso kamarad weyn oo saddax ah. Xaaladdan oo kale waxay ku taal aagga saxda ah oo ay weheliso nalka LED-ka iyo qalabka loo yaqaan ‘laser sensor’. Bartamaha waxaa ku yaal sumadda shirkadda.
Akhristaha sawirka faraha dhinaca
Booska hore wuxuu ku yeelan doonaa meegaar ugu yaraan aagagga kore iyo kan hoose labadaba. Dheeraad ah, Waxay umuuqataa inay horey u lahaan doonto aflagaadal labo afle ah. Waxa aan ku yeelan doonno dhinaca hore waa qoraalka akhristaha faraha. Muuqaalka waxaad ku arki kartaa sida tani ay ugu xirnaan doonto dhinaca, sida jiilka hore. Badhanka mugga iyo awooda ayaa waliba ku jiri doona dhanka midig, iyo badhanka u heellan kaamirada.
Annagu garan mayno astaamo dheeri ah oo ku saabsan aaladdaan. Wax walbana waxay muujinayaan inay la imaan doonto processor-ka Qualcomm Snapragon 855+, kaas oo la bilaabay dhowr toddobaad ka hor. Waxaan sidoo kale arki karnaa qaabeynta RAM aad uga awood badan jiilkii hore, iyo sidoo kale garoomo kale oo dhexda ku dhexjira oo ku raaci doona aaladdaan cusub ee Sony.